Salaadaha Sunnooyinka (al-Nawaafil) Ama (Raatibka) Loo Yaqaana – Wajibad
Salaadaha Sunnooyinka (al-Nawaafil) Ama (Raatibka) Loo Yaqaana
(Raatibka) Loo Yaqaana
صلاة السنة والنوافل
Tusmo Gaaban oo Ku Saabsan
Sunnooyinka La Raaciyo
Salaadaha Waajibaadka ah
Mahad oo idil Ilaahay (سبحانه و تعالى) ayay u sugnaatay, asaga ayaanu ku u mahad celineynaa, asaga ayaanu kaalmo weeydiisaneynaa, asaga ayaanu ka magan galeynaa nafteena shararkeeda iyo camalkeena xumaantiisa. Ilaahay kor ahaayee qofkii hanuuniyo ayaa hanuunsan, qofkuu lumiyana uma aadan heleysaan wax hanuuniya. Waxaan qiraayaa inu nabi Muxammad (صلی اللہ علیہ وسلم) yahay rasuulkii Alle.
Waxaan halkaan tusmo gaaban uga bixin doonaa salaadaha sunnooyinka oo lala xiriiriya salaadaha waajibaadka ah. In Shaa Allaah wixii saxid u baahan ama talo waxaad inagu soo hagaajin kartaan cinwaanada hoos ku qoran. Wa jazaakum Allaahu Khayran.
Maxay yihiin (Salaadaha sunnooyinka ah oo la raaciya salaadaha waajibka ah)?
Meeqa sunnooyin ayay ka kooban yihiin dhamaan marka laysku wada daro?
Salaada sunno ah oo ku dhaaftay amak kaa tagtay ma la soo celin karaa?
Sheekh Bin Baas (Ilaahay ha u naxariistee) waxa uu yiri:
Salaadaha (Rawaatibka) ah ee uu Rasuulka (صلی اللہ علیہ وسلم) aad u dhowri jiray ama aad u xafidi jiray waxay ka kooban yihiin laba iyo tobon (Sunnooyin) marna kama uusan tegin jirin haduu magaalada ku nag yahay iyo haduu safar yahayba.
Laba iyo Tobonka Sunno waxay kala yihiin:
Laba Rakcadood salaada (Fajarka) ka hor
Afar rakcadood salaada (Duhuka) ka hor, iyo laba rakcadood salaada duhu ka dib
Laba rakcadood salaada (Maghribka) ka dib
Labad rakcadood salaada (Cishaha) ka dib
Rasuulka (صلی اللہ علیہ وسلم) wuxuu ahaa mid aanan ka tegin sunnooyinkaa aad ayuu u xafidi jiray qaasatan marka uu magaalada ku nag yahay.
Rasuulka Alle (صلی اللہ علیہ وسلم) waxa uu yihi:
”Qofkii daa’ima ama xafida afar rakcadood salaada (Duhu) ka hor iyo afar rakcadood salaada duhu ka dib Ilaahay (سبحانه و تعالى) naarta wuu ka xarimaa jismigiisa.”
Hadii uu qofku dukada afar rakcadood salaada (Duhu) ka dib, asigoo ku daraaya laba rakcadood, oo sidaasi uga dhiga afar rakcadood waa mid aad u khayr badan, laakiin raatibka kama mid ahan ee waa laba rakcadood oo dheeraad ah. Sida aan soo sheegnay, raatiba waa laba oo keliya. Marka qofka salaada dukanaayo haduu ka dhigo afar rakcadood salaada (duhur) ka dib meesha ay ka ahayd labada rakcadood, fadliga ay leedahay kor ayaan ku soo sheegnay.
Waxa ayana la mid ah salaada (Casirka) ka hor qofka in uu dukado afar rakcadood, iyada Raatibka kama mid ahan, laakii waa (Mustaxaba).
Sida uu Rasuulka Alle (صلی اللہ علیہ وسلم) yiri:
”Ilaahay (سبحانه و تعالى) ha u naxariisto qofkii dukada afar rakcadood salaada (Casirka) ka hor.”
Laba iyo tobkaa (Raatibka) ee aan kor ku soo sheegnay waa kuwa Rasuulkeena suubanaa
(صلی اللہ علیہ وسلم) kama uusan tegin jirin.
Salaad sunno ah oo kaa taktay ama ku dhaaftay mala soo celin karaa?
Salaadaha sunnaha ah ee la soo celin karo waxaa ka mid ah salaada (Fajarka), iyada hadey ku dhaafto waad soo celin kartaa laakiin waxaa haboon in aad soo celiso marka ay cadceeda ama qoraxda ay kor noqoto si fiican u soo baxda.
Waxaa ayadana la mid ah salaada (Duhu) ka hor afarta rakcadood ee sunnada haday ayadana ku dhaafto, waxaad soo celin kartaa salaada waajibka (Duhuka) ka dib. Total ahaana waa sideed rakcadood oo sunno ah marka leysku daro afarta hore iyo afarta dambe ee salaada duhurka.
 Sida caadigaha totalka waa 6 rakcadood, laakiin 8 wxay noqon marka uu ku daro labada rakcadood ee fadliga badan ee aan kor ku soo sheegnay.
Ilaahay ha inaga aqbalo Salaadaha iyo Acmaasha wanaagsan.